Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Hibanmayno Tagtadeeni ee Waxaynu Hubsan Timaadadeena.
Maqaal: Hibanmayno Tagtadeeni ee Waxaynu Hubsan Timaadadeena.
1. Rumayn (Iimaan)
● Aas’aaska iimaanku waa wadne wax garad ah.
● Aas’aaska Daacadnimaduna waa qalbi fayow.
● Aas’aaska Xamaasaduna waa dareen xoogan.
● Aas’aaska Hawshuna waa go’aan adag.
Intaas aynu sheegnay oo dhan waa mid ay dhallintu iska leedahay oo u gaara ah, sidaas ayayna dhallintu waligeedba u ahayd tiirka kicitaankeeda iyo fulinteeda, fulin kastaana waxay iska sirta xoogeeda, fikrad kastaana waxay leedahay cid qaada calankeeda. Hadaba hadii ay xaqiiqooyinka maanta yihiin riyooyinkii shalay oo ahaa in la halgami karo wakhti dheer ilaa xoriyada. Riyada maantana waa xaqiiqda barito oo ah in la guulaysan karo.
Dhallinyartu ha aqoonsato inay yihiin xooga aan xuduudka lahayn ee isbadal la taaban karo, la tiigsan karo, lana tijaabin karo taas oo keeni karta guul. Marka waxaan idin leeyahay hiban mayno tagtadeeni ee waxaynu hubsan timaadadeena.